မြောက်အမေရိကက F-100C စူပါဖုံးကိုဓားရှည် CWDT FSX & P3D ဒေါင်းလုပ်
Size: 33.2 ကို MB
ဤတွင် F-100 စူပါဖုံးကိုဓားရှည်ကိုပထမဦးဆုံးအမေရိကန်အသံထက်မြန်တိုက်လေယာဉ် (1955 အတွက်ပထမဦးဆုံးလေယာဉ်) ၏တစျခုဖွစျသညျ, ဒီ add-on တစ်ခုဇာတိပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပါသည် FSX acceleration သဟဇာတ Prepar3D v4 + ။ အတော်ကြာ animations တွေကိုအခြေခံကို virtual cockpit, 2D panel ကနေ, အသံ, သုံး repaints နှင့် documentation.The Norte နှင့်အတူထည့်သွင်း ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ ဂန္ထဝင် Warbirds ဒီဇိုင်းအဖွဲ့, LLS အားဖြင့်အထုပ်များနှင့်ဇာတိပြောင်းလဲခြင်း
မြောက်အမေရိက Rockwell OV-10D USMC & CAP FSX & P3D ဒေါင်းလုပ်
Size: 18.7 ကို MB
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရိန်း၏အရောင် Rockwell OV-10D Broncos (USMC) နှင့်မြို့ပြလေကြောင်းကင်းလှည့် (CAP: အမေရိကန်လေတပ်တစ်ဦးကအရပ်သားအရန်) ။ 3D မော်ဒယ်ဇာတိကူးပြောင်း FSX LLS အားဖြင့် format နဲ့။ Prepar3D v4 သဟဇာတ, ထုံးစံအသံက high-resolution ကိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ, Animation, ထုံးစံ gauge ပါဝင်သည် ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ တိ Conrad ခြင်းဖြင့်မူရင်းမော်ဒယ် FSX ခရစ်အီဗန်တို့ကစုရုံးခဲ့ခြင်းနှင့် edited LLS အားဖြင့်ဇာတိ format နဲ့, ကဲန်ဂလေဇာတို့က repaint
alpha ကို T-28 Trojan ဟာသတ်မှတ်မည် FSX & P3D ဒေါင်းလုပ်
ကို T-28 Trojan ဟာ 1949 ပြီးနောက်အမေရိကန်ရေတပ်ကအသုံးပြုမယ့်လေ့ကျင့်ရေးလေယာဉ်တစ်စင်းသည်။ ဒါဟာနောက်ပိုင်းမှာ T-34 ဆရာဖြင့်အစားထိုးသည်။ ဒါဟာလေယာဉ်တစ်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောပေါ်ဆင်းသက်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးကအံ့သြစရာအတွက် add-on ဇာတိများအတွက် (FS2004 သဟဇာတဗားရှင်းကဒီမှာရရှိနိုင်ပါသည်) FSX & P3D ယခင်က payware ယခုမူကားအခမဲ့! ကိုးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ, တစ်ဦး VC ကိုကျေးပါဝင်သည် ... ဆက်ဖတ်ရန်
IRIS Pro ကိုစီးရီးကို T-6A တက္ကဆက် II ကို FSX & P3D HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 23 860
Size: 86.0 ကို MB
အဆိုပါ Beechcraft သည် T-6 တက္ကဆက် II က Raytheon လေယာဉ်ကုမ္ပဏီ (ယခု Hawker Beechcraft) ကတည်ဆောက် single-အင်ဂျင်တာဘိုပရော့လေယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ အ Pilatus PC-9 အပေါ်အခြေခံပြီး, T-6 အခြေခံပညာလေယာဉ်မှူးသင်တန်းကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလေတပ်ကမူလတန်းများအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကရေတပ်နှင့်အလယ်အလတ်ပူးတွဲ Na အသုံးပြု ... ဆက်ဖတ်ရန်
မြောက်အမေရိက Rockwell OV-10A Broncos စီးရီး FSX HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 16 305
ဗားရှင်း FS2004 ဖြည့်ညှင်းခြင်းမရှိဘဲကြိုးစားရန်တဖန်စူပါအံ့ဩ hereHere ကိုကလစ်နှိပ်ပါဒီမှာကောင်းမွန်စွာပြုကြတဲ့အလုပ်ပါ! HD ကို 2048x2048 ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ DXT5, အရည်အသွေးမြင့်ကို virtual cockpit နဲ့နှိပ်, ထုံးစံအသံ, ဇာတိ: ဒီနေရာမှာတိ Conrad.All-အားလုံးပါဝင်နိုင်ဗူးဖြစ်ပါသည် FSX SP2 အတူ created 3D မော်ဒယ် FSX SDK ကို SP2 / Acceleration.Incl ... ဆက်ဖတ်ရန်
အဘို့မြောက်အမေရိကကို T-6G တက္ကဆက် FSX SP2 HOT ဒေါင်းလုပ်
Size: 18.82 ကို MB
အဆိုပါမြောက်အမေရိကလေကြောင်းသည် T-6 တက္ကဆက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းနှင့်ထဲသို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်လေတပ်, အမေရိကန်ရေတပ်သည်ဗြိတိသျှဓနသဟာယ၏တော်ဝင်လေတပ်နှင့်အခြားလေကြောင်းတပ်ဖွဲ့များ၏လေယာဉ်မှူးလေ့ကျင့်ဖို့အသုံးပြု single-engine ကိုအဆင့်မြင့်လေ့ကျင့်လေယာဉ်ပျံခဲ့ 1950 ရဲ့။ မြောက်အမေရိကတစ်ဦးကဒီဇိုင်း ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ ဒါဝိဒ်သည် Eckert, Warwick Carter ကမိုက်ကယ် Flahault
မြောက်အမေရိကက F-86 EF ဖုံးကိုဓားရှည် FSX HOT ဒေါင်းလုပ်
Size: 39.04 ကို MB
အဆိုပါ FS2004 သဟဇာတမူကွဲများအတွက် hereHere ကိုကလစ်နှိပ်ပါမြောက်ကိုရီးယားအမေရိကန်က F-86 E / F ဖုံးကိုဓားရှည် + SP1 များအတွက်မွမ်းမံ FSX။ အပြည့်အဝ 3D cockpit နဲ့ဓာတ်ပုံကို-လက်တွေ့ကျကျဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနဲ့လေယာဉ်ပျံ, အသံမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ကြပြီးမော်ဒယ်အလွန်အရည်အသွေးမြင့်မားသည်။ ဤသည် add-on ကိုအလွယ်တကူတစ် payware ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမယ့် ou များအတွက် freeware ရဲ့ ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ SectionF8, လိုက်လျောညီထွေ FSX : Björn Kesten, EDCW